Ciidamada Suuriya oo Tobanaan qof ku dilay Gudaha Wadankaasi – SBC
Ciidamada Suuriya oo Tobanaan qof ku dilay Gudaha Wadankaasi
Posted by Webmaster on Noofember 15, 2011 Comments
Wararka ka imaanaya Wadank Suuriya ayaa kuwaramaya in Daraasiin dad ah lagu dilay gudaha wadankaasi ka dib markii ciidamada amaanka iyo kooxo ka soo goostay ay isku dhaceen waxaana ka soo baxaya Warar is qilaafsan tirade dadka wax ku noqday isku dhacaas.
Sida ay ku waramaya dad ku dhaqan deegaanada ay ka dhaceen isku dhacyada sida Magaalada Homs ayaa ku waramaya in guud ahaan la dilay dad ku dhow 51 qof kuwaasi oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ay ciidamada Asad si toos ah ugu dileen gobo ay ku sugnayeen .
Magaalooyinka ku yaala Bariga wadanka Suuriyay oo ay ku jirto Magalada Homs waxaa ka dhacay tan iyo intii ay biloowdeen kacdoonka wadanka dilal kala duwan oo ay ciidamada ka amar qaata Bashaar asad ay ku dilee Boqolaal dad ah.
Dhinaca kale wakaalada wararka ee Reuters ayaa ku warameysa in Kooxaha u dhaqdhaqa dadka rayid ah ay sheegayan in Magaalada Khirbet Ghazaleh lagu dilay 40 qof oo rayid ah
Dilalkan ugu danbeeyay ee ka dhacay wadanka Suuriya waxaa ay imanaayaan xilli wadamada caalamka ay baaq xoogan u dirayaan Hogaanka wadankaasi inuu badbaadiyo shacabka wadankiisa oo diidan hogaanka wadankiisa.
Boqorka wadanka Jordan oo ugu danbeeyay hogaamiyahaasha Carbeed ee Baaqa u dira Asad ayaa ugu baaqay inuu is casilo si loo badbaadiyo shacabka maalin walba lagu gumaadayo gudaha wadanka
Dowlada Suuriya baaqyada kala duwan ee caalamka dhagaha ayay ka fureysatay waxayna sii xoojisay dagaalka tooska ah ee ay kula jirto dadka wadanka oo ka soo horjeeda